vol ။6အမှတ် 3
vol ။6အမှတ်4- II ကို။
vol ။6အမှတ်5- III ကို။
vol ။6အမှတ်6- IV ။
vol ။7အမှတ် 1 - V.
vol ။7အမှတ်2- VI ကို။
သုံးလောကထိုးဖောက်, ဝန်းရံနှင့်နိမ့်ဆုံးသောဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီး, နှင့်သုံး၏အနည်အနှစ်များချီပင့်။
vol ။6ဒီဇင်ဘာ, 1907 ။ အမှတ် 3
HW PERCIVAL နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်, 1907 ။
ဒီနည်းကိုဆောင်းပါးစိတ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူ၎င်း၏ကွန်နက်ရှင်သည်နှင့်အဘယ်အရာကိုပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာဖို့စိတ်ချက်ချင်းဆက်ဆံရေးဟာအထဲကထောက်ပြညွှန်ပြခြင်းနှင့်အသိပညာ၏စိတ္တဇကမ္ဘာ၏အမှန်တကယ်တည်ရှိမှုကိုပုံဖော်, စိတ်ကိုသတိရှိရှိအသိပညာနှင့်အတူအထဲတွင်အသက်ရှင်လျက်, ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ပြတဦးတည်းဖြစ်လာပေမည်ပါလိမ့်မယ် သိစိတ်ကိုမသိ။
အတော်များများသည်လူကိုသူအသက်, အလိုဆန္ဒများ, အာရုံ, သူသည်စိတ်ရှိပြီးအသုံးပြုနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြောင်းရှိကြောင်းသူတစ်ဦးကိုယ်ထည်ရှိပြီးသိတယ်သည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည် ဒါပေမယ့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်အမှန်တကယ်သူ၏အသက်တာ, အလိုဆန္ဒများနှင့်အာရုံများမှာဘာအရာကိုအဖြစ်မေးခွန်းထုတ်လျှင်အဘယ်အတွေးကသူ့စိတ်ကိုအဘယျဖြစ်ပါသည်, သူသည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြသောအခါ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူကသူ့အဖြေကို၏ယုံကြည်မှုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ နည်းတူများစွာသောသူတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, နေရာအရာသို့မဟုတ်ဘာသာရပ်သိသောအခိုင်အမာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုသိသောအရာကိုပြောပြရန်ရှိသည်နှင့်သူတို့သိပုံကိုဆိုပါကမိမိတို့ထုတ်ပြန်ချက်များအတွက်လျော့နည်းအချို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတပုံကိုအဘယ်ကြောင့်မြေကြီးသည်သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များထုတ်လုပ်, အဘယ်အရာကိုမြေကြီးတပြင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ပေးသောအားဖြင့်သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းသည်လေတိုက်နှုန်း, မီးနှင့်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ပေါ်စေသည်, လောကီသားသည်၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ်ကဘာလဲဆိုတာရှင်းပြဖို့ရှိပြီး အကယ်. စစ်ဆင်ရေးအဘယ်, ယဉ်ကျေးမှုများတက်နှင့်အကျသညျလူသားတို့၏လူမျိုး၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်စေသည်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မိမိကြံစည်ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုမှညွှန်ကြားလျှင်ထို့နောက်သူသည်ရပ်မှာလူစဉ်းစားရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တိရစ္ဆာန်သည်လူလောကသို့ကြွလာ; အခြေအနေများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဘဝသူ၏ mode ကိုသတ်မှတ်။ သူကတိရိစ္ဆာန်သည်လူဖြစ်နေဆဲနေစဉ်, သူကပျော်ရွှင်-go-ကံကောင်းထုံးစံ၌အလွယ်ကူဆုံးလမ်းအတွက်လျှောက်တွင်ရဖို့စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရှည်လျားသည်သူ၏ချက်ချင်းလိုချင်တပ်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါသလဲအဖြစ်သူကသူတို့အကြောင်းတရားများအဖြစ်မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲရှုမြင်သောအရာကြာနှင့်သာမန်ပျော်ရွှင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝနေထိုင်ပါတယ်။ သူတွေးမိဖို့အစပြုလာသောအခါမိမိအဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အချိန်ရှိတယ်လာသည်။ သူကတောင်များမှာအံ့ဘွယ်သောအမှု, အတွင်းနက်, သူသည်မီးနှင့်၎င်း၏ All-စားသုံးပါဝါမှာသမုဒ္ဒရာ၏ဟောက်အံ့ဘွယ်သောအမှုသူသည်မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း, လေ, ထိုမိုဃ်းချုန်း, လျှပ်စီးမှာ, စစ်ဒြပ်စင်မှာအံ့ဘွယ်သောအမှု။ သူကဤသို့နှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရာသီမှာအံ့ဘွယ်သောအမှု, ကြီးထွားလာအပင်, ထိုပန်းပွင့်ရဲ့အရောင်, သူလမှာနှင့်၎င်း၏ပြောင်းလဲနေတဲ့အဆင့်မှာ twinkling ကြယ်မှာအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်သူသည်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နေရောင်မှာအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်များ၏လှူကြောင့် adores အလင်းနှင့်အသက်။
အံ့သြစရာကတော့နိုးထစိတ်ကိုပထမဦးဆုံးညွှန်ပြသည်တွေးမိနိုင်စွမ်း, လူသားတစ်ဦးမှတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်ကနေသူ့ကိုပြောင်းလဲ; ဒါပေမယ့်စိတ်ကိုအစဉ်အမြဲအံ့ဩခြင်းမရပေမည်။ ဒုတိယအဆင့်ကနားလည်ပြီးအံ့ဩအရာဝတ္ထု၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေခြင်းငှါကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်။ တိရိစ္ဆာန်သည်လူဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၌ဤအဆင့်တွင်ရောက်ရှိသည့်အခါသူသည်မြင့်တက်နေနှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရာသီ watched, နှင့်အချိန်များ၏တိုးတက်မှုများကိုမှတ်သား။ လေ့လာရေးသူ၏နည်းလမ်းများအားဖြင့်, သူသည်၎င်းတို့၏သိသိထပ်မဖြစ်အောင်အညီရာသီ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်လေ့လာသင်ယူ, သူသည်ရှေ့တော်၌, aeons သူကိုသတ္တဝါအားဖြင့်သိရန်သည်သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ကူညီခဲ့သည်ကိုသူပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့သည့်ကျောင်းရှောက်သွားခဲ့သည်။ မှန်ကန်စွာသဘာဝတရား၏ထပ်တလဲလဲဖြစ်ရပ်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ဖို့, ဒီအဘယ်အရာကိုလူတို့အားရက်ကြာခေါ်ဆိုခအသိပညာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသိပညာနှင့်အာရုံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အညီသရုပ်ပြခြင်းနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်ကဲ့သို့သောအရာများကိုအများနှင့်ဖြစ်ရပ်များသည်။
စိတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အာရုံပွုစုပြိုးထောသူတို့ကိုရှောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏တစ်ဦးအသိပညာရဖို့ရန်အဘို့အဒါဟာအသက်အရွယ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီ ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စှမျးဒါကြောင့်တဆင့်လာဒါမှမဟုတ်အသိတရားအယူခံမဘာမှရိပ်မိနိုင်ခြင်းကြောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အသိတရားများနှင့်အားဖြင့်ချိန်ညှိခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ၏တစ်ဦးအသိပညာရရှိမှုအတွက်စိတ်ကိုယ်နှိုက်ကသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာကိုတိရစ္ဆာန်ယောက်ျား၏စိတ်ကိုမိမိအကာလအတွင်းပြုသကဲ့သို့စစ်မှန်သောအသိပညာရန်, သာမန်စိတ်ကိုအတူတူစပ်လျဉ်းဆိုလိုတာပါ။ တိရစ္ဆာန်သည်လူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏သူတို့အားနိုးအဖြစ်က Man အတွင်းကမ္ဘာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမှယနေ့နိုးထဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအတွင်းမှာတော့လူ့စိတ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစွာကိုသံသရာနှင့်အဆင့်ရှောက်သွားခဲ့ပါသည်။ က Man စားရန်, ရှူဖို့, စို့ခံရဖို့, မွေးဖွားခံရဖို့ကျေနပ်ရောသောက်, စီးပွားရေးပြုလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်သေဆုံး, ကောင်းကင်ဘုံ၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်အခုသူဒါရောငျ့ရဲမဟုတ်ပါဘူးခဲ့သည်။ သူဟာရှေ့တော်၌ပြုသကဲ့သို့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမလာသေးယဉ်ကျေးမှုအတွက်လုပ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ယောက်ျား၏စိတ်ကိုအသက်တာ၏ humdrum ရေးရာထက်တခြားအရာတစ်ခုခုမှနိုးထတစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုက၎င်း၏ချက်ချင်းဖြစ်နိုင်ခြေ၏န့်အသတ်ကျော်လွန်တစ်ခုခုတောင်းဆိုနေပြီသည့်မငြိမ်သက်မှုများအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပူပနျခွငျးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်ဝယ်လိုအားစိတ်ကိုလုပ်ဖို့ကြောင့်လူသိများခဲ့ပါသည်ထက်ပိုမိုသိရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ကြောင်းတစ်ခုသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ က Man သောသူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူသည်အဖို့ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိမေးခွန်းထုတ်ကြသည်။
အချို့သောအခြေအနေများအတွက်မိမိကိုမိမိရှာဖွေခြင်းသည်ဤ၌ထကြီးထွားလာနှင့်သူ၏ဆန္ဒကိုအညီပညာသင်ကြားလျက်ရှိသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်သော, ဒါပေမယ့်သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆက်လက်ပါလျှင်သူဖြစ်နိုင်သည်သို့သော်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူ့ကိုကျေနပ်အောင်မည်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူဟာကရရှိသွားတဲ့, ပိုမိုအောင်မြင်မှုတောင်းဆိုနေပြီနှင့်နေဆဲသူကျေနပ်သည်မဟုတ်။ သူဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် gayeties, အပျော်အပါး, ရည်မှန်းချက်နှင့်လူမှုရေးအသက်တာ၏မှီတောင်းဆိုစေခြင်းငှါ, သူတောင်းနှင့်အနေအထားနှင့်အာဏာကိုရောက်ရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူနေဆဲချည်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်များအတွက်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနရဲကဖြစ်ရပ်နှင့်ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းချုပ်ချက်ချင်းဥပဒေများအချို့၏အသွင်အပြင်ကိုရည်မှတ်စိတ်ထဲများ၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များပြန်ပြောလို့ပဲ။ စိတ်ကိုပြီးရင်သူကသိလို့ပြောစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ရပ်များ၏အကြောင်းတရားများကိုသိရန်ရှာကြံတဲ့အခါမှာ, ကနောက်တဖန်ကိုယ်ချည်းပါပဲ။ အနုပညာသဘောသဘာဝသို့ယင်း၏လှည့်လည်အတွက်စိတ်ကိုကူညီပေမယ့်စံပြပိုဆင်းလှသောအစ်မ, လျော့နည်းကအသိတရားသရုပ်ပြနိုင်ပါတယ်လို့စိတ်ကိုမှမကျေနပ်မှုအတွက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်ပုဒ်သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်သော်လည်းကအာရုံမှတဆင့်တစ်ဦးအနက်အားဖြင့်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသည်ဘာသာတရား, သိကျွမ်းရာအနိမ့်ဆုံးကျေနပ်စရာသတင်းရပ်ကွက်အကြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၏ကိုယ်စားလှယ်များသည်အာရုံအထက်တွင်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ဘာသာတရား၏စကားပြောဆိုသော်လည်း, ထိုသူတို့ဘာသာရေးအားဖြင့်၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်များဆန့်ကျင် အရာ၏, ထိုအာရုံမှတဆင့်အားဖွငျ့ပိုဆိုးနေကြသည်။ တစ်ခုဖြစ်သည်သမျှအခွအေနေအောက်မှာသူဖြစ်နိုင်သည်နေရာတိုင်းမှာသူအတူတူစုံစမ်းရေးကော်မရှင်မလွတ်နိုင်သည်ဘယ်အရာကိုတပ်မက်သောစိတ်, ကအားလုံးကိုဆိုလို-နာကျင်မှု, အပျြောအပါး, အောင်မြင်မှု, ဒုက္ခ, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, မုန်းတီးမှု, ချစ်ခြင်း, အမျက်ဒေါသမ; ယင်းနှင့်လိုက်အောင်, ထင်ယောင်ထင်မှား, ဘေးဥပဒ်, ရည်မှန်းချက်, မျှော်မှန်းချက်, သူသည်ရာထူးကိုစီးပွားရေး, ပညာရေးအောင်မြင်မှုမှီကြပေမည်, သူကြီးအသင်ယူမှုရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူလေ့လာသင်ယူခဲ့ရာကနေသိတယ်အဘယ်အရာကိုကိုယ်တော်တိုင်တောငျးလြှငျ, သူ့အဖြေကိုမကျေနပ်ကြဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ကမ္ဘာ၏ကြီးမြတ်အသိပညာရှိစေခြင်းငှါသော်လည်း, သူမှာပထမဦးဆုံးသူသိတယ်ထင်သောအရာကိုမသိကြောင်းသိတယ်။ အဘယ်အရာကိုကအားလုံးကိုနည်းလမ်းအံ့သြခြင်းအားဖြင့်, သူသည်မိမိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးအတွင်းအခြားကမ္ဘာ၏တစ်ဦးသဘောပေါက်သို့ဝငျမြား၏ဖြစ်နိုင်ခြေတငျပွ။ ဒါပေမယ့်တာဝန်ကသူ့ကိုစတင်မည်သို့မသိသဖြင့်ခက်ခဲကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါကအသစ်တခုဤလောကသို့ဝင်ဝကမ်ဘာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသောစှမျးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်သောကြောင့်ကြာမြင့်စွာမှာအံ့ဩခြင်းမလိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအစှမျးတီထွင်ခဲ့ကြလျှင်, လောကီပြီးသားလူသိများမဟုတ်, အသစ်များကိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အသစ်ဖြစ်၏နှင့်ကမ္ဘာသစ်မှာသတိတည်ရှိရန်လိုအပ်သောစှမျးသူကမ်ဘာသိစေခြင်းငှါ, ထိုစှမျးဖွံ့ဖြိုးရမယ်အရာအားဖြင့်သာနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ လြောကျအဖြစ် အဲဒီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်မဟာဌာနကိုသုံးပါရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးသိရန်သင်ယူခဲ့ပါသည်, ဒါကြောင့်, စိတ်ကို၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်, ပုံစံခန္ဓာကိုယ်, အသက်, က၎င်း၏အလိုဆန္ဒအခြေခံမူအဖြစ်ကွဲပြားအခြေခံမူများနှင့်ကိုယ်နှိုက်ကနေအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောသိရန်သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အဖြစ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်သည်အဘယ်အရာကိုသင်ယူဖို့ကြိုးစားနေမှာစိတ်ကိုသဘာဝကျကျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကနေသူ့ဟာသူခွဲခြားနှင့်အရှင်ပိုပြီးအလွယ်တကူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပြဇာတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာသတိထားဖြစ်လာနိုင်ပြီးအနာဂတ်မှာယူရပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသကဲ့သို့, စိတ်ကိုလောကီသားတို့သည်ဝဒေနာနှင့်အပျော်အပါးက၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်သင်ပေး, ဤသင်ယူခြင်းကြောင့်ဆိတ်ကွယ်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေကိုယ်နှိုက်ကကိုဖေါ်ထုတ်ရန်သင်ယူဖို့အစပြုပေးသောသင်ခန်းစာများကိုသိလာကြတယ်။ သို့သော်မပေးအများအပြားဘဝတွေကိုနှင့်ရှည်လျားသောအသက်အရွယ်အပြီးသည်အထိဒီတော့သူ့ဟာသူကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကတတ်နိုင်သည်။ သူကနာကျင်မှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း, ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါ၏သင်ခန်းစာများမှငါ့ကိုနှိုး, မိမိနှလုံးထဲသို့ကြည့်ဖို့အစပြုသကဲ့သို့, လူပုံပေါ်စေခြင်းငှါအဖြစ်လှပအမြဲတမ်းဤလောကကြောင်းတွေ့ရှိသည်အများအပြားကမ္ဘာသာ coarsest နှင့်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါသည် အရာအတွင်းနှင့်ကအကြောင်းရှိပါတယ်။ သူသည်မိမိစိတ်ကိုသုံးစွဲဖို့ enabled ဖြစ်သကဲ့သို့, သူသူကအခုဆိုရင်သူသိတယ်ထင်ရာ, ဒါပေမယ့်သူအမှန်တကယ်အတွက်ဒါနည်းနည်းသိတယ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုအရာရိပ် မိ. နှင့်နားလည်သကဲ့သို့, ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့မြေကြီးတပြင်အတွင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကမ္ဘာရိပ်မိနားလည်စေခြင်းငှါ ၏။
အဲဒီမှာဝန်းရံထားတဲ့သုံးကမ္ဘာဖြစ်ကြ၏ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်နိမ့်ဆုံးနှင့်ထိုသုံး၏ crystal ဖြစ်သောငါတို့ဥစ်စာ၏ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီး, ထသည်းခံကြ၏။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင်အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတွေအားဖြင့်ရေတွက်အဖြစ်ကြီးမားသောကာလ၏ရလဒ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်နှင့်ကွဲပြားသိပ်သည်းဆ attenuation etherial ကိစ်စရပျအဟောင်းတွေကမ္ဘာ၏ involution ၏ရလဒ်များကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ယခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညျမွကွေီးပျေါကတဆင့်လည်ပတ်ရသောဒြပ်စင်များနှင့်တပ်ဖွဲ့တွေအဲဒီအစောပိုင်းကမ္ဘာ၏ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်။
ငါတို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေဆဲဖြစ်ကြောင်းရှေ့ပြေးခြင်းနှင့်မီး, လေနှင့်ရေကဲ့သို့ရှေးလူသိများခဲ့ကြသည်သောသုံးလောက, ဒါပေမယ့်မီးလေထု, ရေ, နှင့်လည်းမြေကြီး, ကျွန်တော်စည်းကမ်းချက်များ၏သာမန်အသုံးပြုမှုအတွက်သိတော်မူသောသူတို့ကိုမရှိကြပေ။ သူတို့ဟာအဲဒီဝေါဟာရများအားဖြင့်သိကြသောအရာကိစ္စများ၏ substrata သောမှော်အတတ်ဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအကမ္ဘာငါတို့သည်တဖန်မိတ်ဆက်ပေးဦးမည် comprehension ၏ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်အံ့သောငှါ ပုံ 30 ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ involutionary နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ကျနော်တို့မပြောတတ်ပေးရမည်ရာလေးပါးကိုကမ္ဘာကိုယ်စားပြုနှင့်လည်းအချင်းလူသား, ကိုယ်ပိုင်ကမ်ဘာပျေါတှငျသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါငျးတို့သစစ်ဆင်ရေး၏လေးရှုထောင့်သို့မဟုတ်အခြေခံမူပြသထားတယ်။
ပုံ 30 ။
လေးပါးတွင်ပထမနှင့်အမြင့်ဆုံးကမ္ဘာဖြစ်သည့်မီးလျှံမှော်အတတ်၏ဒြပ်စင်သည်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤပထမကမ္ဘာသည်မီးတစ်ခုဖြစ်သောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည့်ကမ္ဘာဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောအရာအားလုံး၏ဖြစ်နိုင်ခြေများပါ ၀ င်သည်။ မီး၏ဒြပ်စင်တစ်ခုမှာမြင်နိုင်သောမြင်ကွင်းကိုမမြင်ရသောအထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်လိုင်ယာစင်တာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဝေါ်သောအကူးအပြောင်းဖြစ်သည့်တိုင်၎င်းသည်ယခုထိရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံစံသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆထက်ကျော်လွန်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်သည်။ ။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှာအသက်ရှုခြင်းနှင့်ကင်ဆာ (♋︎) ၏သင်္ကေတဖြစ်သည် ပုံ 30 ။ ၎င်းသည်အသက်ရှုခြင်း၊ အရာအားလုံး၏အလားအလာများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းအားမီးများဟုခေါ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောမီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်မီးလျှံမဟုတ်ပါ။
သွေးကြောထဲ ၀ င်ရောက်သောအခါမီးသို့မဟုတ်အသက်ရှူသောကမ္ဘာသည်သူ့ဟာသူအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ထိုနေရာ၌သက်ရှိလောကဟုခေါ်တွင်သည်။ ကိန်းဂဏန်းတွင်လီအို (♌︎)၊ ထို့နောက်သက်ရှိလောကသည်လေထုဖြစ်သည်။ လေ၊ လေနှင့်အတူအသက်ရှူသောကမ္ဘာ၏ ၀ ိညာဉ်သည်မီးဖြစ်၏။ ဘဝကမ္ဘာကိုခန့်မှန်းထားပြီးသီအိုရီများကိုခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာဖြင့်အဆင့်မြင့်ထားသည်။ သို့သော်ဘ ၀ သည်အဘယ်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီများကသီအိုရီသဘောတရားအရကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်သူတို့ထင်မြင်ချက်အများစုတွင်မှန်ကန်မှုရှိသည်။ အသက်ရှူခြင်းအားဖြင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သော ၀ တ္ထုသည်သက်ရှိလောက၌နှစ်မျိုးနှစ်စားကိုပြသသည်။ ၀ ိညာဉ်ရေးရာသည်ဘဝလောကရှိမှော်အတတ်၏လေ။ လီယို (♌︎); ၎င်းသည်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သူတို့၏အဆုံးမဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုပြုမူခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့သည်အက်တမ်အခြေအနေကိုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ အက်တမ်တစ်ခု၏သိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ - မော်လီကျူးတစ်ခုဖွဲ့စည်းခြင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်အသေးငယ်ဆုံးစဉ်းစားနိုင်သောအရာ ၀ တ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာဟုခေါ်ဝေါ်သောဘဝကမ္ဘာ (♌︎) တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ထင်ရှားပေါ်လွင်မှုအတွက်ဖြေကြားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၀ ိညာဉ်ပစ္စည်း၊ အက်တမ်တစ်ခု၊ ခွဲ။ မရသည့်အမှုန်တစ်ခုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းမပြုရ။ အတွေး (can) သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဘက်၌ဖြစ်သောကြောင့်အတွေးကိုသိမြင်နိုင်သူမှအတွေးမှတစ်ဆင့်ရိပ်မိနိုင်သည်။ တွေ့ရမည့်အတိုင်းနတ် ၀ င်ဖြစ်သောသက်ရှိဘဝ (() သည် involutionary ဘက်ဖြစ်သောဘဝအတွေး (♌︎ – ♐︎) ဖြစ်သည်။ ပုံ 30 ။ နောက်ပိုင်းတွင်သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်မှုများနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များဖြစ်ပေါ်မှုတွင်အက်တမ်သည် ခွဲခြား၍ မရနိုင်သောအရာဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုအစိတ်အပိုင်းများစွာအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သောကြောင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုပြန်လည်ခွဲခြားနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအရာအားလုံးကသူတို့၏စမ်းသပ်မှုနှင့်သီအိုရီ၏အကြောင်းအရာသည်အက်တမ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊ အမှန်တကယ်အက်တမ်ထက် ပို၍ သိပ်သည်းသည်မှာသက်သေပြနိုင်ရုံသာမကခွဲခြား။ မရနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တွေ့ရခဲသောအက်တမ်စိတ်ဓာတ်သည်သက်ရှိများလောက၏ကိစ္စဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်သည်ရှေးခေတ်ကာလကိုလေဟုခေါ်သောမှော်အတတ်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
သွေးကြောများ ၀ င်ရောက်ခြင်းသံသရာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခါဘဝကမ္ဘာ၊ လီယို (♌︎) သည်၎င်း၏အမှုန်သို့မဟုတ်အက်တမ်အမှုန်များကိုမိုးရွာသွန်းမှုနှင့်ကြည်လင်ပြန့်ပွားစေသည်။ ဤနက္ခတ်ဗေဒင်သည်သင်္ကေတ (virgo (()) ပုံစံဖြင့်သင်္ကေတပြုသောပုံစံဖြစ်သည်။ အဆိုပါပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒကမ္ဘာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်, အပေါ်နှင့်အတွက်စိတ္တဇပုံစံများပါရှိသည်။ ရုပ်ကမ္ဘာ၏ပုံစံသည်ရေဖြစ်သည်။ ရူပဗေဒပညာရှင်များခေါ်ဆိုရမည့်ရူပဗေဒပညာရှင်နှစ် ဦး ၏ပေါင်းစပ်ထားသောရေသည်မဟုတ်။ ဤနက္ခတ်ဗေဒင်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုသိပ္ပံပညာရှင်များကအက်တမ်ဒြပ်ထု၏သက်ရှိကမ္ဘာအတွက်မှားယွင်းစွာယူမှတ်သောကမ္ဘာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နက္ခတ္တဗေဒပုံစံကမ္ဘာတွင်မော်လီကျူးပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးမျက်စိကိုမမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အတွင်း၌ရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်လာသည့်ပုံစံအားလုံးကိုအတူတကွပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကို libra (♎︎) ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏မှော်အတတ်ကိုရှေးကမ္ဘာမြေကြီးဟုလူသိများကြသည်; ငါတို့သိသောကမ္ဘာမဟုတ်၊ နက္ခတ်ဗေဒင်ကမ္ဘာတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်အမှုန်များ၏ကျန်ရှိနေသောအကြောင်းရင်းနှင့်၎င်းတို့သည်မြင်နိုင်သောကမ္ဘာအဖြစ်ပေါ်ထွန်းသောမျက်မြင်မရသောမြေကြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင်နိုင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြေကြီး၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး စွာနက္ခတ်ဗေဒင်ကမ္ဘာ (♎︎)၊ ထို့နောက်နက္ခတ္တဗေဒပုံစံ (♍︎)၊ ထို့နောက်၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဒြပ်စင်များဖြစ်သောသက်ရှိများ (♌︎)၊ ထိုအရာများမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းခြင်းနှင့်အသက်ရှုခြင်း (♋︎) ၎င်းသည်မီးကမ္ဘာနှင့်အရာအားလုံးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရွေ့လျားစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးတွင်ကမ္ဘာလေးပါး၏အင်အားနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအဓိကထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိပါကထိုအရာများ၏အသိပညာနှင့်အသုံးပြုမှုထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်ထူးဖြစ်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာကြီးသည်ပြိုလဲပျက်စီးနေသောအခွံတစ်ခု၊ အရောင်မဲ့အရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်သောအခါသို့မဟုတ်မြင်တွေ့ရလျှင်နာကျင်မှု၊ ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုများနှင့်လူဆိတ်ညံရာအဖြစ်အပျက်များကအာရုံခံစားမှု၏စွဲမက်ဖွယ်ရာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး ကမ္ဘာ၏အနတ္တ။ စိတ်သည်သူတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်များကိုရှာဖွေ။ ကုန်လွန်သွားသောအခါဤသည်ဖြစ်လာသည်။ ဤရွေ့ကားသွားပြီ, သူတို့နေရာမှယူဘာမှကမ္ဘာကြီးအရောင်နှင့်အလှအပအားလုံးရှုံးနှင့်ဖှယျခြောက်သွေ့သောသဲကန္တာရဖြစ်လာသည်။
အရောင်အားလုံးသည်ဘဝမှသက်ဆင်းသွားပြီးဘဝကိုယ်နှိုက်ကစိတ်ဆင်းရဲစရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်အခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိသောကြောင့်စိတ်ကိုဤအခြေအနေသို့ရောက်သောအခါစိတ်ကိုပြန်ပေါ်စေသည်သို့မဟုတ်နိုးထစေမည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခြင်း မှလွဲ၍ သေခြင်းတရားသည်မကြာမီတွင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အချို့သောစာနာမှုခံစားချက် (သို့) ခံစားမှုအချို့ကိုဖော်ပြရန်။ ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်လာသောအခါ၊ ယခင်ကဟောင်းနွမ်းသောအကျင့်ဓလေ့များမှဘဝကိုပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်ပေါ်ထွက်လာသောအလင်းသစ်အရကမ္ဘာနှင့်သူ့ဟာသူအားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိသည်။ ထိုအခါအရောင်မရှိဘဲသောအရာသည်အသစ်သောအရောင်များကိုယူပြီးဘဝကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရာအားလုံးနှင့်အရာအားလုံးသည်ယခင်ကထက်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ အရင်ကအချည်းနှီးဖြစ်နေပုံရသောပြည့်စုံမှုရှိသည်။ အနာဂတ်သည်အသစ်သောအလားအလာများနှင့်ထင်မြင်ချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အသစ်များနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောနယ်ပယ်များဆီသို့ ဦး တည်သွားစေမည့်စံနမူနာများပေါ်လာသည်။
In ပုံ 30၊ ကမ္ဘာကြီးသုံးခုကိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားများကစတုတ္ထအနိမ့်ဆုံး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၊ libra (♎︎) တွင်တွေ့ရသည်။ လိင်စိတ်နိုးထမှု၏လိင်စိတ်သည် virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎) ကမ္ဘာပုံစံနှင့်သာကန့်သတ်ထားသည်။ စိတ်သည်မိမိကိုယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်း၏အာရုံသာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်မိပါက၎င်းသည်၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောလူသားများအားလုံးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ကျုံ့ဝင်စေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အာရုံများမှတစ်ဆင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့ ဦး တည်စေသောလမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီး ဒါကြောင့်သူက၎င်း၏စွမ်းရည်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အားဖြင့်မြင့်မားသောကမ္ဘာကနေအလင်းပိတ်ထား။ ထို့ကြောင့်လူသား၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝသည်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကရှိ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရာတစ်ခုကိုစိတ်ကူး။ မထား၊ သတိရသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မူလကအသက်ရှုခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသောကာယရေးလောကနှင့်လိင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းတွင်နိမ့်ဆုံးကာလ (သို့) ကင်ဆာလက္ခဏာပြသည့်မီးဘေးကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ကိုသတိရသင့်သည်။ လီယို (♌︎) ၏အမှတ်အသားတွင်အသက်ရှူခြင်း၊ ပါဝင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဘဝသည်အပျိုကညာနှင့်သင်္ကေတပုံစံတွင်ပုံစံပြုခြင်း၊ ပုံစံနှင့်မွေးကင်းစ (libra (sex)) တွင်မွေးဖွားခြင်းနှင့်လိင်သည်။
အသက်ရှုမီးတောက်ကမ္ဘာသည်အကြွင်းမဲ့ဆိုးရွားသောရာသီဥတုတွင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအစဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် aries (♈︎) တွင်ဝိညာဏလူသား၏ zodiac တွင်စတင်ခဲ့သည့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောစကြ ၀ mindာ၏စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်၏ involution ၏အစဖြစ်ပြီးကင်ဆာလက္ခဏာပြရန်ကင်ဆာ (Taurus (♉︎) နှင့် Gemini (through) မှဆင်းသက်လာသည်) the), အကြွင်းမဲ့အာဏာရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာကို leo (♌︎) ၏လေယာဉ်ပေါ်တွင်ဖြစ်သောဝိညာဏရာသီခွင်၏။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုလီယို (,)၊ အသက်သည်အကြွင်းမဲ့တည်ရှိသည့်ရာသီဥတု၏ဝိညာဏရာသီခွင်၏ကင်ဆာ (♋︎)၊ အသက်ရှူခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတုဖြစ်ပေါ်မှု၏အစဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာ (sign) တွင်စတင်သည်၊ Taurus (♉︎) မှတစ်ဆင့်ဝိညာဉ်ရေးရာရာသီဥတု၏ဘဝ၊ လီယို (♌︎)၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတု၏ကင်ဆာ (♋︎) နှင့်၎င်းမှအောက်သို့သက်ရောက်သည်။ virgo ၏ plane လေယာဉ်ပေါ်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတု၊ of ပုံသဏ္theာန်၊ ပကတိရာသီဥတု၊ ကင်ဆာ (♋︎) ၏လေယာဉ်ပေါ်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတု၏နိမိတ်လက္ခဏာ leo (♌︎) ၏အမှတ်အသားပြုသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားနှင့်သူ၏ရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာ aries (by) ကမှတ်သားအဖြစ်။
လူ့သမိုင်း၏ဝေးကွာသောအတိတ်ကာလ၌လူ့ပုံစံသို့လူ့ဇာတိခံယူထားသောလူ၏စိတ်သည်၎င်းကိုလက်ခံရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်မွေးဖွားခြင်း၏အမှတ်အသား၊ အဆင့်၊ အဆင့်နှင့်အတိုင်းအတာဖြင့်မှတ်သားထားဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်တွင်ပြန်လည်ရှင်သန်လာနိုင်သည်။ ဤအချက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားနှင့်ပတ်သက်သောပြicationsနာများကိုလိုက်နာရန်ခက်ခဲသော်လည်း၊ လူလေးယောက်နှင့်၎င်းတို့၏ရာသီဥတုအခြေအနေကိုအောက်ပါအတိုင်းပြသထားသည်။ ပုံ 30၊ ပုံတွင်ဖော်ပြထားသောအမှန်တရားများစွာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
Libra (♎︎)၊ လိင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှပြသထားသည့်လူ၏စိတ်နှင့်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ယခင်ကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သောကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှစတင်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအလိုဆန္ဒမှတစ်ဆင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်အကြွင်းမဲ့စတုတ္ထရာသီခွင်၏နိမိတ်လက္ခဏာကင်းမြီးကောက် (♏︎)၊ အလိုဆန္ဒဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ ဒါဟာပကတိရာသီခွင်၏ဤနိမိတ်လက္ခဏာကို Scorpio (♏︎) သည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအပျိုကညာ (♍︎) ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းနှင့်ဖြည့်စွက်ကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။ ဤပစ္စုပ္ပန်ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်သော virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎) သည်ဘဝအတွေးအခေါ်၊ လီယို-sagittary (♌︎ – ♐︎) သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတု၏ဖြတ်သန်းမှုကိုဖြတ်သန်းသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားနှင့်သူ၏ရာသီဥတု၏ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်နယ်နိမိတ်ဖြစ်သောအဘိဥာဏ်ရာသီဥတု၏တစ် ဦး ချင်းစီ (ic – ♑︎) ။ ထို့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားသည်မိမိကိုယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်သန္ဓေတည်စေရန်သက်ဆိုင်ရာအလောင်းများ၊ ဒြပ်စင်များနှင့်မတူညီသောကမ္ဘာများ၏အင်အားစုများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ဟုထင်ပြီးသူထင်မြင်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာသူ၏ ဦး ခေါင်းသည် leo-sagittary (♌︎ – ♐︎)၊ ဘဝအတွေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတုနှင့်လေယာဉ်၏ထိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်ရာသီဥတု၏ကင်ဆာ capricorn (♋︎-♑︎), အသက်ရှူ - တစ် ဦး ချင်းစီ, သို့သော်ဤအရာအားလုံးသည်ပကတိရာသီခွင်၏ပုံစံ - အလိုရှိသည့် virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎) ၏လေယာဉ်ဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည်။ သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားသည်စကြဝioာ (♏︎) ၏နိမိတ်လက္ခဏာတွင်ရှင်သန်နိုင်ပြီး၊ လောကနှင့်ကမ္ဘာပုံစံများကိုအလို ရှိ၍ ရိပ်မိနိုင်သည်၊ အပျိုကညာ (♍︎) ၏လေယာဉ်ပုံစံ၊ သူ၏အတွေးများဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုလီယို - sagittary (♌︎ – ♐︎) ၏စိတ်ကူးကမ္ဘာ (zodiac) သို့သူကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံများ၊ ဘဝနှင့်အတွေးအခေါ်များထက်မက၊ libra ရှိသူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အသက်ရှူခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ။ ဤသူကားငါတို့ပြောသောတိရစ္ဆာန်ပေတည်း။
တိရိစ္ဆာန်လူသားတစ် ဦး သည်မူလအခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ၊ ယဉ်ကျေးသောလူ့ဘ ၀ ၌ဖြစ်စေတင်းကြပ်သောသတ္တဝါလူသားသည်ဘဝ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကိုစတင်တွေးတောလာပြီးသူမြင်တွေ့ရသောဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ချေများအကြောင်းကိုတွေးတောဆင်ခြင်သောအခါသူသည်မိမိ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွံကိုဖြိုခွဲခဲ့သည်။ ရာသီဥတုနှင့်ကမ္ဘာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေအဘိဥာဏ်ကမ္ဘာကသူ့စိတ်ကိုတိုးချဲ့; ထို့နောက်သူ၏အဘိဥာဏ်လူသား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ကေတမှာပြထားတယ်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသား၏ကင်ဆာ - capricorn (♋︎ – ♑︎) ၏လေယာဉ်ပေါ်ရှိသူ၏ Zodiac ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူ၏ aries (♈︎) နှင့် Leo-sagittary (♌︎ – ♐︎) တို့ဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကို။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသား၏ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သော capricorn (♑︎) မှသူသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာရှိ zodiac တွင်အထက်သို့တက်ပြီးပင်လယ်ရေ၊ soul၊ စိတ်ဝိညာဉ်၊ pisces (ari) ၏အဆင့်နှင့်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုဖြတ်သန်းသည်။ ကင်ဆာ - capricorn (♋︎ – ♑︎) ၏လေယာဉ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည့်အဘိဥာဏ်ရှိသောလူသား၌ဖြစ်သော aries (conscious), ဝိညာဏ်၊ စိတ်၏လူ၏အသက်ရှူမှု - တစ်ကိုယ်ရေနှင့်လီယို sagittary (♌︎ – ♐︎), ဘဝ - အတွေးအမြင်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာရာသီခွင်၏။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လူကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနှင့်ပတ်သက်။ ထို့ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်နှင့်သူ၏အတွေးနှင့်လုပ်ရပ်အားဖြင့်, ပစ္စည်းပြင်ဆင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတု၏နိမိတ်လက္ခဏာ capricorn (at) မှာစတင်တိုးချဲ့သော, ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစီအစဉ်များကို lay လိမ့်မည် အထက်သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနှင့်သူ၏ရာသီဥတု၏ရေခဲ, စိတ်ဝိညာဉ်, pisces, အလိုတော်, Aries (♈︎) မှတဆင့်။ သူသည်ယခုအခါကင်ဆာ - capricorn (♋︎ – ♑︎)၊ အသက်ရှူခြင်း - တစ် ဦး ချင်းဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သောဝိညာဏရာသီဥတုတွင်တည်ရှိနေပြီး၎င်းသည်လေယာဉ် Leo-sagittary (♌︎ – ♐︎)၊ သက်ရှိထင်ရှားရာသီဥတု၏အတွေးအခေါ်လည်းဖြစ်သည်။
သူသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်စိတ်ကိုတီထွင်လိုက်သောအခါတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ကမ္ဘာ၏ဘဝနှင့်အတွေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိပ်မိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံပညာ၏အကန့်အသတ်နှင့်နယ်နိမိတ်မျဉ်းဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏ဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအားဖြင့်စိတ်အတွေး၏ပင်ကိုစရိုက်ဖြစ်သောကမ္ဘာ့အတွေးအခေါ်၏လေယာဉ်ပေါ်သို့တက်နိုင်ပြီးထိုလေယာဉ်၏သက်ရှိနှင့်သက်ဆိုင်မှုများကိုလည်းခန့်မှန်းနိုင်သည်။ သို့သော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်သူ၏အတွေးများအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီဥတုကိုသာကန့်သတ်မထားသင့်ပါ၊ သို့သော်အထက်တွင်မြင့်တက်ရန်ကြိုးပမ်းသင့်ပါကသူသည်လေယာဉ်၏ကန့်သတ်ချက်မှစတင်ကာ capricorn ဖြစ်သောသူအလုပ်လုပ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြလိမ့်မည် (would သူ၏ဝိညာဏရာသီဥတုနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာများမှတဆင့်မြင့်တက်ရာငါးမျှား (♒︎), ဝိညာဉျ, pisces (♓︎), အလိုတော်, Aries (♈︎), ဝိညာဏ်, သည်သူ၏ဝိညာဏရာသီခွင်၌ဝိညာဉ်ရေးရာလူ၏အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည့်နှင့် ပကတိရာသီဥတု၏ကင်ဆာ - capricorn (♋︎-♑︎) အသက်ရှူ - တစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့်ကာရံထားခြင်းခံရသည်။ ဤသည်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်စိတ်၏အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှု၏အမြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရောက်ရှိသောအခါတစ် ဦး ချင်းစီမသေနိုင်သောအဖြစ်သည်အမှန်တကယ်တည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၊ အခြေအနေမျိုး၌မဆိုဤသို့ရရှိခဲ့သည့်စိတ်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်သတိမဲ့နေမည်မဟုတ်ပါ။
“ အိပ်စက်ခြင်း” ဟူသောနောက်ဆုံးအယ်ဒီတာတွင်“ အတင်းအဓမ္မကြွက်သားများနှင့်အာရုံကြောများ” ဟူသောစကားလုံးများကိုအမှတ်မထင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ နိုးနေစဉ်နှင့်အိပ်ပျော်စဉ်တွင်အသုံးပြုသောကြွက်သားများအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းအိပ်ချိန်တွင်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများမှာအဓိကအားဖြင့်စာနာစိတ်ဆိုင်ရာအာရုံကြောစနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးနိုးကြားနေသည့်အခြေအနေတွင်လှုံ့ဆော်မှုများကို cerebro-spinal nervous system ဖြင့်သာသယ်ဆောင်သည်။ ။ ဤအယူအဆသည်“ အိပ်စက်ခြင်း” ဟူသောအယ်ဒီတာအဖွဲ့တစ်ခုလုံးမှတစ်ဆင့်ကောင်းမွန်သည်။